inkumbulo Virtual ubuchwepheshe ekhethekile lapho ukuphathwa inkumbulo computer asebenzisa multi-functional wokusebenza. Ingqikithi lobu buchwepheshe itholakala lokuthi uhlelo ngamunye ukuqinisekisa ukusebenza kahle yayo njengengxenye leli thuluzi, ibhekisela imemori ingqikithi computer endaweni ehlukile. Ekhuluma le ngendlela ethile liboniswa module ngokomzimba enikeza lo inkumbulo. Ukwanda inkumbulo kahle, ihlelwe ngalendlela, ibangelwa yokuthi edingekayo inkumbulo isikhala kugcinelwe Uhlelo ngalunye egijima. Ngaphezu kwalokho, virtual inkumbulo computer evumela umsebenzisi ukuze wandise ivolumu Imininingwane, ukufinyelela izibalo ukuthi idlule lezo eziqukethwe amadivayisi abonakalayo. Lokhu kuqinisekiswa uzotshala ubuchwepheshe izinsiza ubuningi Igumbi.
Ukuvela lobu buchwepheshe iphathelene phakathi nekhulu leminyaka eledlule. Ngaphambi kwalokhu, inkumbulo ezingeni amabili asetshenziswa embhalweni Computing amadivayisi - zamabanga aphansi naphezulu. Ukuvela inkumbulo virtual iye nje isuke ibangelwa isidingo ukuthola ukulawula imodi elula ke.
Uma usebenzisa imemori olubonakalayo ikhompyutha lula kakhulu inqubo izinhlelo ngoba aqede isidingo gcina ukulawula njalo phezu inani lememori esetshenziswa futhi khulula noma ukukuyekisa ukusinikeza abantu phakathi izinhlelo ukugijima. Ukuze cishe zonke isicelo egijima ngaphansi kwalesi ubuchwepheshe inikeza ukufinyelela wonke isikhala ikheli, kungakhathaliseki umthamo yayo kwi amadivayisi abonakalayo ibalwa.
Ngomqondo jikelele kakhulu, imemori olubonakalayo ikhompyutha wenza imisebenzi elandelayo:
- lula futhi rationalizes ekhuluma izicelo inkumbulo egijima;
- inikeza inkumbulo kahle ukuphathwa - RAM, by Ukukhetha futhi isitoreji se-izicelo ethandwa kakhulu futhi asetshenziswa njalo;
- babe ezizimele Computing izinqubo ngendlela yokuthi inqubo ngamunye luyasetshenziswa sengathi wonke khompyutha inesikhala inkumbulo.
Ngo amakhompyutha zanamuhla ukudala virtual inkumbulo ubuchwepheshe isekelwa futhi ngezithukuthuku ukwesekwa hardware, ngaphandle imisebenzi ekhethekile, edinga ukugcinwa kwamakhilomitha ukusebenza Imodi yesivinini eliphezulu kakhulu. Ngokuvamile, lezi amadivaysi kungukuthi yenzelwe ukusetshenziswa mass, kodwa ngenxa multifunktsional yabo lulinganiselwe kakhulu.
Kubhekwe ubuchwepheshe luyasetshenziswa ngezindlela ezimbili eyinhloko ekuhleleni.
Ukwakha kuhilela sokuhlukanisa inkumbulo ku emakhasini ivolumu esinqunyiwe, njengoba umthetho - 4096 bytes. Ngaphakathi, iqukethe usayizi wefayela, okuyinto is code Imininingwane mayelana inombolo yayo serial (inombolo yekhasi) kanye ukufuduka yayo. I-CPU ikhompyutha siguqule inombolo yekhasi ikheli ehambisana. Processor oguqula inombolo yekhasi abonakalayo ikheli esihambisanayo kudivayisi ngokomzimba. Uhlelo lokusebenza bebodwa le "amathrekhi" ukusetshenziswa kwalesi inkumbulo, nezilawuli ke, kuye kuba ukuthi wayematasa noma cha.
Ingxenye inhlangano kusekelwe yokuthi yonke inkumbulo virtual kukhompyutha ihlukaniswe yaba izingxenye ezithile - izingxenye lapho yesistimu yokusebenza futhi inikeza ukufinyelela amalungelo for Uhlelo ngalunye. Inqubo ekhuluma e le ndlela cishe efanayo ukuthi isetshenziselwe ikhasi-mode, kodwa kwehlukana ukusatshalaliswa ingxenye kwenzeka, okuba nomthelela omubi ijubane PC. Ukuze unqobe ngokuphazamisa enjalo kungaba ngezindlela ezimbili: kuphakathi kokuthi ukwandisa inani lememori esetshenziswa noma sikhululekile, by ihlanzeke futhi idatha ezingadingekile. Ukuze ufunde indlela ukukhulula imemori virtual, yimuphi umsebenzisi lingasho uMnyango Izikhombo yesistimu yokusebenza efakiwe kukhompyutha yakho bese kukhona le nqubo elula ngokuningiliziwe ngesineke.
Ukwandisa inani lememori virtual ingafinyelelwa ngezindlela ezimbili eziyinhloko - by zokuhlanjululwa, njengoba kuchaziwe ngenhla, noma ukwandisa umthamo yayo ngokufaka imishini emisha. Kukhona izinhlelo eziningi ukuthi uzokutshela kanjani ukwandisa inani lememori abonakalayo, izinga usizo ukukwenza ngokwakho.
I scarab engcwele. I engcwele scarab ibhungane